समाचार - कुन राम्रो छ, सेतो पोर्सिलेन वा नयाँ हड्डी पोर्सिलेन, मलाई परिचय दिन दिनुहोस्?
कुन राम्रो छ, सेतो पोर्सिलेन वा नयाँ हड्डी पोर्सिलेन, मलाई परिचय दिनुहोस्?
पोर्सिलेन टेबलवेयर दैनिक टेबलवेयरको सबैभन्दा सामान्य टेबलवेयर हो। कच्चा मालका अनुसार पोर्सिलेन टेबलवेयरलाई सेतो पोर्सिलेन टेबलवेयर, हड्डी पोर्सिलेन टेबलवेयर र शेल पोर्सिलेन टेबलवेयरमा विभाजित गरिएको छ। ती मध्ये हड्डी चीना टेबलवेयर अधिक लोकप्रिय छ।
हड्डी चीनालाई सुरुमा हड्डी चीना भनिन्थ्यो, तर मानिसहरूलाई लाग्थ्यो कि "राख" शब्द "सुरुचिपूर्ण" होईन, त्यसैले तिनीहरूले यसको नाम परिवर्तन गरेर हड्डी चीना, वा हड्डी चीना छोटो बनाए। हड्डी चीनियाले b०% भन्दा बढी शाकाहारी जीवहरू समावेश गर्दछ र एक वातावरण मैत्री हरियो उपभोक्ता उत्पादन हो। सामान्य सिरेमिकको तुलनामा, अद्वितीय फायरिंग प्रक्रिया र हड्डी कार्बनको सामग्रीले हड्डी चीनलाई सेतो, नाजुक, पारदर्शी, र हल्का बनाउँदछ। हड्डी चीन टेबलवेयर खरीद गर्दा, तपाईं निम्न तीन विधिहरूद्वारा भेद लिन सक्नुहुन्छ।
एक, आशा। हड्डी चीनाको रंग: हड्डी चीना आफै हड्डी पाउडरको कारण एक प्राकृतिक क्रीमी सेतो हो, जुन लोकप्रिय शब्दहरूमा अलि बढी पहेंलो हुन्छ। यो सुविधा कुनै पनि अन्य पोर्सिलेन द्वारा अनुकरण गर्न सकिदैन।
बजारमा अब पोर्सिलेनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रकारहरू, जस्तै सेतो पोर्सिलेन, शेल पोर्सिलेन, र मोती पोर्सिलेन सबै शुद्ध सेतो हुन्। हामी निलो सेतोको रूपमा शुद्ध सेतो वर्णन गर्न सक्छौं; दोस्रो, ती सबै हड्डी चीना हुन्, तर पहेँलोको डिग्रीले हड्डी पाउनाको हड्डी पाउडर सामग्री आफै भन्न सक्छ। हड्डी चीन को लागी, हड्डी पाउडर को सामग्री हड्डी चीना को ग्रेड छुट्याउन एक महत्वपूर्ण प्राविधिक सूचकांक हो। अधिक हड्डी पाउडर, अधिक उच्च-स्तरको हड्डी चीन, र अधिक हड्डी चीन को रंग दूधिया सेतो हुन जान्छ। यसको विपरित, यदि हड्डीको खाना सामग्री कम छ भने, हड्डी चीनको चिल्लोपन आफैँ नै स्पष्ट छ।
दोस्रो, गन्ध। हड्डी चीनको आवाज: यसको उत्पादनको कारणले, त्यहाँ हड्डी चीनको एक महत्वपूर्ण बाह्य विशेषता रहेको छ, जुन यो आवाज हो जब हड्डी चीन टकराउँछ जब दुई उच्च-ग्रेडको हड्डी चीनको कटोरा तपाईंको फ्ल्याट हातमा टकराउनको लागि राखिन्छ, ध्यान दिनुहोस्, हड्डी चीना एक उच्च तापमान मा निकालिएको एक चीनी मिट्टी को छ। कठोरता धेरै छ। यस प्रकारको टकराव बिग्रिने छैन। तपाईं अलि कडासँग टकराउन सक्नुहुन्छ। उच्च ग्रेड हड्डी चीन टक्कर पछि घण्टा जस्तै कुरकुरा उत्सर्जन हुनेछ। "क्लng्ग" को ध्वनि प्रतिध्वनि हुन्छ, र इको समय लामो हुन्छ, जबकि अन्य पोर्सिलेनहरूले सुस्त "डिंग" ध्वनि बनाउँदछन्, र मूलतः कुनै प्रतिध्वनि हुँदैन।